minthantzaww: “သက္ကာယဒိဋ္ဌိ အရင်ဖြုတ်ပါ”
(၄) သီလ၊ သမာဓိ၊ ပညာ သိက္ခာသုံးပါးကိုမယုံဘူး။
(၅) သံသရာရဲ.ရှေ.အစွန်းကို မယုံဘူး။
(၆) သံသရာရဲ. နောက်အစွန်းကို မယုံဘူး။
(၇) ရှေ.အစွန်းကိုရော နောက်အစွန်းကိုပါ မယုံဘူး။
(၈) ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ကို အယုံအကြည်မရှိဘူး။
ဒီယုံမှားခြင်း (၈) မျိုးဟာ သက္ကာယဒိဋ္ဌိကြောင်. ဆက်ဖြစ်လာတာ။ သက္ကာယဒိဋ္ဌိရှိလို. သဿတဒိဋ္ဌိနဲ. ဥစ္ဆေဒဒိဋ္ဌိဆက်ဖြစ်တယ်။ ဒါကြောင်.မို. သက္ကာယဒိဋ္ဌိပြုတ်ရင် သဿတဒိဋ္ဌိနဲ. ဥစ္ဆေဒဒိဋ္ဌိလည်း အလိုလိုပြုတ်တယ်။ ၀ိစိကိစ္ဆာဆိုတဲ. ယုံမှားခြင်းလည်း ကင်းသွားတယ်။
ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေ ဒါန၊ သီလ၊ ဘာဝနာတွေပြုကြတယ်။ သစ္စာတရားကျကျနနမနာရလို.ရှိရင် ဒိဋ္ဌိဖြစ်တာများတာပဲ။ ငါတို.ပြုတဲ. ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကို နောင်ဘ၀မှာ ငါတို.ပဲ စံရမှာလို.ထင်ကြတယ်။
ကုသိုလ်လုပ်တာလည်း ငါတို.ပဲ။ ကုသိုလ်အကျိုးကိုစံရမှာလည်း ငါတို.ပဲ။ ရုပ်နာမ်နှစ်ပါးကို ငါသူထင်နေတဲ.အတွက် သက္ကာယဒိဋ္ဌိလည်း ဖြစ်တယ်။ ယခုပြုတဲ.ငါနဲ. စံစားရမယ်.ငါကို တစ်ထပ်တည်း ယူထားတဲ.အတွက် သဿတဒိဋ္ဌိလည်းဖြစ်တယ်။
တချို.ကျတော. အခုဘ၀ကိုယ်က အခုဘ၀စံ။ နောင်ဘ၀ကိုယ်က နောင်ဘ၀ခံ။ ဒီဘ၀ကိုယ်နဲ. နောင်ဘ၀ကိုယ်က လုံးဝအဆက်အစပ်မရှိဘူး။ သက်သက်စီလို. ယူလိုက်တဲ.အတွက် ဥစ္ဆေဒဒိဋ္ဌိဖြစ်သွားတယ်။
အဲဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးက အကုသိုလ်လုပ်ဖို. ၀န်မလေးတော.ဘူး။
အမှန်က အကြောင်းအကျိုးက ပြတ်သွားတာမဟုတ်ဘူး။ ကမ္မသတ္တိအရ အကြောင်းအကျိုးတော. ဆက်စပ်နေတယ်။ သို.သော်လည်းပဲ ဒီဘ၀ရုပ်နာမ်တွေက ဒီဘ၀မှာပဲ ချုပ်တယ်။ ဟိုဘက်ဘ၀ကို မလိုက်ဘူး။ ဒီဘ၀ရုပ်နာမ်တွေက ဟိုဘက်ဘ၀ကို လိုက်တယ်လို.ထင်ရင် သဿတဒိဋ္ဌိ။
အကြောင်းကံတွေက ဒီဘက်မှာပဲ ပြီးသွားတယ်။ ဟိုဘက်ဘ၀ကို လုံးဝလိုက်ပြီးအကျိုးမပြုဘူးလို.ထင်ရင်လည်း ဥစ္ဆေဒဒိဋ္ဌိ။
အဲဒီနှစ်ခုကြားထဲက သွားတာမှ မဇ္ဈိမပဋိပဒါသမ္မာဒိဋ္ဌိ။ အဲဒီ သမ္မာဒိဋ္ဌိအမြင်မျိုးက သံသယကင်းရှင်းမှဖြစ်တာ. ။
မနေ.တုန်းက တရားနာထားတဲ.စွမ်းအားကြောင်. ဒီနေ. တရားတွေပိုသဘောပေါက်တယ်။ မနေ.ကတရားအားထုတ်ခဲ.တဲ.အတွက်ကြောင်. ဒီနေ.ပိုပြီးတော. သမာဓိ၇လာတယ်။ ပိုထိုင်နိုင်လာတယ်။ ဥာဏ်လည်းပိုပွင်.လာတယ်။ ဒါဟာ ကမ္မသတ္တိအရ အကြောင်းအကျိုးတွေ ဆက်စပ်နေလို.ပဲ။ အဲဒီလို အကြောင်းအကျိုးဆက်တာကို သဘောပေါက်မှ ဥစ္ဆေဒဒိဋ္ဌိစင်တာ။
အဲဒီလို ကမ္မသတ္တိတွေက အကြောင်းအကျိုးဆက်စပ်နေပေမဲ. မနေ.တုန်း ရုပ်နာမ်တွေက မနေ.တုန်းကပျက်သွားပြီ။ ဒီနေ. တစ်တိုတစ်စမှ မပါတော.ဘူး။ အကြောင်းရုပ်နာမ်တွေက အကြောင်းနေရာမှာပဲ ပျက်သွားတယ်။ အကျိုးနေရာ ပါမလာဘူး။ အဲဒီလို သဘောပေါက်မှ သဿတဒိဋ္ဌိစင်တာ။
ရုပ်နာမ်အဟောင်းပျက်သွားတဲ. နေရာမှာ ရုပ်နာမ်အသစ်တွေ အစားထိုးဖြစ်တယ်။ အဟောင်းပျက်တာကို မြင်လို.ရှိရင် သဿတဒိဋ္ဌိစင်တယ်။ အသစ်အစားထိုးဖြစ်တာကို မြင်ရင် ဥစ္ဆေဒဒိဋ္ဌိစင်တယ်။
အဲဒီအဟောင်းထဲမှာလည်း ငါ သူတစ်ပါး ယောက်ျား မိန်းမပုဂ္ဂိုလ်သတ္တ၀ါ မပါဘူး။ အသစ်အစားထိုးတဲ.ထဲမှာလည်း ငါ သူတစ်ပါး ယောက်ျား မိန်းမပုဂ္ဂိုလ်သတ္တ၀ါ မပါဘူး။ ပျက်သွားတာလည်း ရုပ်ဓမ္မ နာမ်ဓမ္မ အစဉ်ကြီးတန်းနေတာကို ဥာဏ်နဲ.မြင်တော. သက္ကာယဒိဋ္ဌိစင်တယ်။
ရုပ်ဓမ္မ၊ နာမ်ဓမ္မတွေ ဘာကြောင်.ဖြစ်လာတာလဲဆိုတဲ. အကြောင်းတရားပေါ်မှာ ဥာဏ်မရှင်းလို.ရှိရင်လဲ သံသယ ၀ိစိကိစ္ဆာက ဖြစ်လာတတ်သေးတယ်။ ဖန်ဆင်းရှုင်က ဖန်ဆင်းလို.ဖြစ်လာတာလား။ ဒါမှမဟုတ် သူ.အလိုလိုဖြစ်လာတာလား။ ဘာကြောင်. ဖြစ်တာလဲ။ ဒါလည်း သိထားဖို.လိုတယ်။
အမှန်က ပထ၀ီ၊ အာပေါ၊ တေဇော၊ ၀ါယောဆိုတဲ. ဓါတ်ကြီးလေးပါးနဲ. ဖွဲ.စည်းထားတဲ. ရုပ်တရားတွေဟာ ကံ၊ စိတ်၊ ဥတု၊ အာဟာရ ဆိုတဲ. အကြောင်းတရားလေးပါးကြောင်. ဖြစ်လာရတာ။
ကံကြောင်.ဖြစ်တဲ.ရုပ်၊ စိတ်ကြောင်.ဖြစ်တဲ.ရုပ်၊ ဥတုကြောင်. ဖြစ်တဲ.ရုပ်၊ အာဟာရကြောင်.ဖြစ်တဲ.ရုပ် ဆိုပြီး အမျိုးမျိုးရှိတယ်နော်။
သူ.အလိုလိုပေါ်လာတာ မဟုတ်သလို တန်ခိုးရှင်က ဖန်ဆင်းလိုက်တာလည်း မဟုတ်ဘူး။ အကြောင်းတရားရှိလို. အကျိုးတရားအဖြစ်ပေါ်လာရတာ။
ကံကြောင်.ဖြစ်တဲ.ရုပ်ဆိုတာက မျက်စိအကြည် နားအကြည် နှာခေါင်းအကြည် လျှာအကြည် ကိုယ်အကြည် မနောအကြည်။ အနည်းဆုံး ဒီလောက်လေးတော. သိရမယ်နော်။
သွားချင်တဲ.စိတ်ကြောင်. ကိုယ်ခန္ဓာထဲမှာ ၀ါယောဓါတ်တွေ ပြည်.လာပြီး ဘယ်လှမ်းတယ် ညာလှမ်းတယ်နဲ. သွားတဲ.ရုပ် လှုပ်ရှားတဲ.ရုပ်ကြီး ဖြစ်လာရတာ။ သွားရာကနေ ရပ်ချင်တဲ.စိတ်ဖြစ်လာရင်လည်း ၀ါယောဓါတ်ကြောင်.ပဲ ရပ်တဲ.ရုပ် တည်ငြိမ်တဲ.ရုပ်ကြီး ဖြစ်လာရတာ။ ထိုင်ချင်တဲ.စိတ်ကြောင်.ပဲ တွန်းကန်ထားတဲ. ထောက်ကန်ထားတဲ. ၀ါယောဓါတ်တွေကို တဖြည်းဖြည်းလျှော.ချလိုက်ပြီး လေးတွဲကျလာကာ ထိုင်တဲ.ရုပ်ဖြစ်လာတာမဟုတ်လား။
“သွားလိုရပ်လို၊ ထိုင်နေလို၊ အိပ်လိုစိတ်ဟုသိ။
စိတ်ကြောင်.ဖြစ်သော၊ ဓါတ်ဝါယော၊ နှံ.နှောကိုယ်ဝယ်ပြည်.။
၀ါယောပြည်.သော်၊ ရုပ်သစ်ပေါ်၊ ရုပ်သော်သွားပေ၏။
ပုဂ္ဂိုလ်မသွား၊ ငါမသွား၊ ရုပ်သွားဥာဏ်ဖြင်.သိ။
ပုဂ္ဂိုလ်မထိုင်၊ ငါမထိုင်၊ ရုပ်ထိုင်ဥာဏ်ဖြင်.သိ။
ပုဂ္ဂိုလ်မရပ်၊ ငါမရပ်၊ ရုပ်ရပ်ဥာဏ်ဖြင်.သိ။
ပုဂ္ဂိုလ်မအိပ်၊ ငါမအိပ်၊ ရုပ်အိပ်ဥာဏ်ဖြင်.သိ။”
ရှေ.က အရင်ဖြစ်တဲ.စိတ်ကအကြောင်း၊ နောက်မှဖြစ်တဲ.ရုပ်က အကျိုး။ အကြောင်းကြောင်. အကျိုးဖြစ်တာနော်။ သူ.အလိုလို ဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘူး။ ရုပ်နာမ်ဟာ အချင်းချင်းမှီပြီး ဖြစ်နေကြတာ။ နာမ်ကိုမှီပြီး ရုပ်တွေဖြစ်နေကြသလို ရုပ်ကိုမှီပြီးတော.လည်း နာမ်တွေဖြစ်နေကြတယ်ဆိုတာ သိထားရမယ်နော်။
- မျက်စိအကြည်ရုပ်နဲ. အဆင်းရုပ် ဆုံမိတဲ.အကြောင်းတရားကြောင်. ဖြစ်လာတဲ.အကျိုးနာမ်တရားက “ မြင်သိစိတ်”
- နားအကြည်ရုပ်နဲ. အသံရုပ်ဆုံမိတဲ.အကြောင်းတရားကြောင်. ဖြစ်လာတဲ. အကျိုးနာမ်တရားက ကြားသိစိတ်။
- နှာခေါင်းအကြည်ရုပ်နဲ. အနံ.ရုပ် ဆုံမိတဲ.အကြောင်းတရားကြောင်. ဖြစ်လာတဲ အကျိုးနာမ်တရားက နံသိစိတ်။
- လျှာအကြည်ရုပ်နဲ. အရသာရုပ် ဆုံမိတဲ.အကြောင်းတရားကြောင်. ဖြစ်လာတဲ.အကျိုးနာမ်တရားက အရသာသိစိတ်။
- ကိုယ်အကြည်ရုပ်နဲ. ထိတွေစရာရုပ်ဆုံမိတဲ. အကြောင်းတရားကြောင်. ဖြစ်လာတဲ. အကျိုးနာမ်တရားက ထိသိစိတ်
- မနောအကြည်ရုပ်နဲ. ကြံတွေးစရာဆုံမိတဲ.အကြောင်းတရားကြောင်. ဖြစ်လာတဲ. အကျိုးနာမ်တရားက ကြံတွေးစိတ်။
အဲဒီ ကြားသိစိတ် နံသိစိတ် အရသာသိစိတ် ထိသိစိတ် ကြံတွေးစိတ်တွေကို ခန္ဓာနဲ.ပြောရင် ဘာခန္ဓာလဲ။ ၀ိညာဏက္ခန္ဓာ
၀ိညာဏက္ခန္ဓာဖြစ်ရင် ကျန်တဲ.ဝေဒနာက္ခန္ဓာ သညက္ခန္ဓာနဲ. သခါင်္ရက္ခန္ဓာတွေရော အတူတူဖြစ်မလာဘူးလား။(ဖြစ်လာပါတယ်ဘုရား)
နာမ်ခန္ဓာလေးပါးက ဖြစ်အတူပျက်အတူပဲ။ ခွဲလို.မရဘူး။ အကြည်ရုပ်တွေနဲ. အဆင်းအသံစတဲ. အာရုံတွေကို ခန္ဓာနဲ.ပြောရင် ဘာခန္ဓာလဲ။ ရူပက္ခန္ဓာ။
နာမ်ခန္ဓာကလေးပါး၊ ရုပ်ခန္ဓာက တစ်ပါးဆိုတော. ခန္ဓာငါးပါးနော်။ ဒါဆိုရင် ဒီခန္ဓာငါးပါးဟာ နတ်တွေ ဗြဟ္မာတွေက ဖန်ဆင်းတာလဲမဟုတ်ဘူး။ သူ.အလိုလိုဖြစ်တာလည်း မဟုတ်ဘူး။ အကြောင်းကြောင်. အကျိုးဖြစ်လာတာပဲ ဆိုတာ ဥာဏ်ထဲမှာ ရှင်းသွားတယ်။
အဲဒီလို ခန္ဓာငါးပါးရုပ်နာမ်နှစ်ပါး ဖြစ်လာရတဲ. အကြောင်းတရားအပေါ်မှာ ဥာဏ်ရှင်းမှ သံသယဆိုတဲ. ၀ိစိကိစ္ဆာကသေတာ။ အကျိုးတရားလည်း ကြည်.ဦး။ ဖြစ်လာတာက ရုပ်တွေ နာမ်တွေလား။ ယောက်ျား မိန်းမ ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တ၀ါတွေလား။ (ရုပ်တွေ နာမ်တွေပါ။)
အဲဒီလိုအကျိုးတရားအပေါ်မှာ ဥာဏ်ရှင်းတော. အသိနဲ. သက္ကာယဒိဋ္ဌိသေတယ်။
တရားမနာထားဘူး။ မသိထားဘူးဆိုရင် မနေ.တုန်းကလည်း ငါပဲ။ ဒီနေ.လည်းငါပဲ။ မနက်ဖြန်လည်း ငါပဲ။ ဒီလိုထင်တတ်တယ်။ ပြောရုံဆိုရင်တော. အပြစ်မရှိ်ပါဘူး။ ပြောတဲ.အတိုင်း ထင်ရင်တော. တစ်ဆက်တည်းယူထားတဲ.အတွက် သဿတဒိဋ္ဌိဖြစ်နေတယ်။
သဿတဒိဋ္ဌိဖြစ်ရင် လူ.ပြည် နတ်ပြည်တော. မတားပါဘူး။ မဂ်ဥာဏ်ဖိုလ်ဥာဏ်တော.မရဘူး။
တစ်ထပ်တည်းထင်တယ်ဆိုတော. အပျက်ကို မမြင်ဘူးပေါ.။ ၀ိပဿနာအားထုတ်တယ်ဆိုတာ အပျက်ကိုမြင်အောင်အားထုတ်တာ။
ရုပ်တွေ နာမ်တွေရဲ. အပျက်ကိုမြင်မှ ၀ိပဿနာဥာဏ်ဖြစ်တာ။ အပျက်ကိုမြင်ဖို.အတွက် နှလုံးသွင်းကမှန်နေရမယ်။ ရုပ်တွေနာမ်တွေပဲ ရှိတယ်။ အဲဒီ ရုပ်တွေ နာမ်တွေဟာ တရစပ်ကြီးကို ပျက်နေတယ်။ ဒီလိုနှလုံးသွင်းထားရမယ်။ အခုလို
ဒိဋ္ဌိနဲ.၀ိစိကိစ္ဆာပယ်သတ်ရေးတရားတွေကို သေသေချာချာနာမထားဘူးဆိုရင်လည်း နှလုံးသွင်းမှန်ဖို. မလွယ်ဘူး။
ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေဟာ ကုသိုလ်တွေ ရှိပါရဲ.သားနဲ. အပါယ်လေးပါးကို ကျကျသွားရတာဟာ အရေးတကြီး အရင်ဆုံးလုပ်သင်.တာကို နောက်မှ လုပ်မယ်၊ နောက်မှလုပ်မယ်နဲ. နှလုံးသွင်းမှားနေကြလို.ပဲ။
ကျေးဇူးတော်ရှင် မိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးက.. မင်းတို.စားဝတ်နေရေးတွေ နောက်မှာထား။ မဂ်ဥာဏ်ဖိုလ်ဥာဏ်ရဖို.ကို ရှေ.ကထား။ ရှေ.နောက်ခွဲတတ်ပါစေ” ဒီလိုမိန်.ကြားတော်မူတာ။
တို.သူငါတွေက ရှေ.နောက်အခွဲတွေ မှားနေကြတယ်း။ လောလောဆယ် စားဖို.သောက်ဖို.၊ စားဝတ်နေရေးက ပိုအရေးကြီးတယ်လို.မြင်တယ်။ ဒါတွေလုပ်ရင်းနဲ.ပဲ ဖြတ်ဆိုသေပြီးအပါယ်ရောက်သွားတဲ.အခါကျတော. နှစ်ပေါင်းအသင်္ချေအနန္တပြန်မတက်နိုင်တော.ဘူး။
ရှေ.တွေနောက်တွေလွဲနေတဲ.အခါကျတော. ပစ္စုပ္ပန်မှာချမ်းသာလည်း ခဏပါပဲ။ တော်ကြာ သောကပရိဒေ၀တွေဖြစ်ပြန်ပြီ။ ရွှေတွေငွေတွေ ဘယ်လောက်ပဲရရ ရာထူးတွေဘယ်လောက်ပဲကြီးကြီး သောက ပရိဒေ၀တွေ ဖြစ်ပါတယ်။
အဲဒီသောက ပရိဒေ၀တွေ ငြိမ်းဖို.အတွက် သစ္စာတရားတွေ သတိပဋ္ဌာန်တရားတွေ နာကြားကြ။
ရသလောက်အချိန်ကို လုလုပြီး ၀ိပဿနာတရားတွေကို ဦးစားပေးအားထုတ်ကြ။
မြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူခဲ.တဲ. သတ္တိသုတ်ကို အကျဉ်းချုံးပြီး ဟောဦးမယ်။ ဗြဟ္မာကြီးတစ်ဦးက အင်မတန်သက်တမ်းတိုတဲ. လောကလူသားတွေကို သနားလွန်းလို. လူသားတွေ ဒုက္ခနည်းပြီး အသက်ရှည်ဖို.အတွက် သူ.ရဲ.ထင်မြင်ယူဆချက်တစ်ခုကို မြတ်စွာဘုရားလာလျှောက်တယ်။
ရင်ဝမှာလှံစူးခံနေရတဲ. သူအတွက် လှံကိုနုတ်ပြီး အမြန်ဆုံးဆေးကုဖို. ကိစ္စဟာ ထိုသူအတွက်အရေးအကြီးဆုံးဖြစ်ပါတယ်ဘုရား။ ခေါင်းပေါ်ကဆံပင်ကို မီးလောင်ခံနေရတဲ.သူအတွက်ကလည်း မီးငြိမ်းအောင် အမြန်သတ်ပြီး မီးလောင်ဒဏ်ရာကို ဆေးကုဖို.ကိစ္စဟာ ထိုသူအတွက် အရေးအကြီးဆုံးဖြစ်ပါတယ်ဘုရား။
ထိုနည်းတူစွာ သတ္တ၀ါတွေ အတွက် အရေးတကာ.အရေးအကြီးဆုံးကတော. ကာမရာဂကို ပယ်ဖို.ကိစ္စဖြစ်မယ်လို. တပည်.တော်ထင်မိပါတယ်ဘုရား”
ဗြဟ္မာကြီးက ဒီလိုလျှောက်တယ်။ ကာမရာဂ ဆိုတာက အဆင်း အသံ အနံ. အရသာ ထိတေ.စရာဆိုတဲ. ငါးဖြာအာရုံကာမဂုဏ်တွေကို လိုချင်နှစ်သက်ပြီး စွဲလမ်းနေတာကိုခေါ်တာ။
လှပတဲ.အဆင်းလေးဆိုရင် လိုချင်တယ်။ စွဲလမ်းတယ်၊ ရအောင်ကြိုးစားတယ်။ သာယာတဲ.အသံလေးဆိုရင်လည်း လိုချင်တယ်။ စွဲလမ်းတယ်။ ရအောင်ကြိုးစားတယ်။ သက်မဲ. ပစ္စည်းတင်မကဘူး။ သက်ရှိအလှပိုင်ရှင် အသံပိုင်ရှင်တွေကိုလည်း စွဲလမ်းပြီး ရအောင်ကြိုးစားကြတယ်။
အရသာကောင်းကောင်းလေး စွဲနေတဲ.အခါ ခဏခဏစားရအောင်ကြိုးစားတယ်။ အတွေ.အထိလေးကို စွဲနေတဲ.အခါကျတော. ဒီအတွေ.အထိမျိုး ခဏခဏခံစားရအောင်ကြိုးစားတယ်။
အဲဒီလို ကာမဂုဏ်ကို ခံစားချင်ကြတဲ. ကာမရာဂတွေကြောင်. လောကီလူသားတွေဟာ ဒုက္ခရောက်နေကြတာ။ အသက်တွေတိုပြီး တဖြုတ်ဖြုတ်နဲ.သေနေကြတာ။
ကာမရာဂ အားကြီးလေလေ အသက်တိုလေလေပဲ။
ရာဂလို.ခေါ်တဲ. လောဘဆိုတာ ရုပ်ကိုလည်းလောင် စိတ်ကိုလည်းလောင်တယ်။ ဒေါသက အမြဲတမ်းမဖြစ်ဘူး။ အဆင်မပြေတဲ.အခါမှ ဒေါသကဖြစ်တာ။ လောဘကျတော. အမြဲတမ်းဖြစ်နေတာ။
ဒါကြောင်. ဗြဟ္မာကြီးက အင်မတန်အသက်တိုတဲ.လူသားတွေကို သနားလွန်းလို. လူသားတွေ ဒုက္ခနည်းပြီး အသက်ရှည်ဖို.အတွက် ကာမရာဂကို ပယ်ဖို.ကိစ္စဟာ လူသားတွေအတွက် အရေးတကာ.အရေးအကြီးဆုံးဖြစ်တဲ.အကြောင်း သူ.ရဲ. ထင်မြင်ယူဆချက်ကို ဘုရားလာလျှောက်တာ။
ဗြဟ္မာကြီးပြောမယ်ဆိုလည်း ပြောချင်စရာပဲ။ လူတွေရဲ.သက်တမ်းက ဗြဟ္မာသက်တမ်းနဲ.ယှဉ်ဖို. နေနေသာသာ နတ်သက်တမ်းနဲ.ယှဉ်ကြည်.ရင်တောင် မိနစ်ပိုင်းရက်ပိုင်းလောက်ပဲ ရှိတာ။
လူတို.ရဲ.သက်တမ်း အနှစ် ၅၀ ဆိုတာ…
စတုမဟာရာဇ်နတ်တို.ရဲ. အသက်အားဖြင်.ဆို (၁)ရက်
တာဝတိံသာနတ်တို.ရဲ. အသက်အားဖြင်.ဆို နေ.တစ်ဝက်
ယာမာနတ်တို.ရဲ. အသက်အားဖြင်.ဆို ၆ နာရီလောက်
တုသိတာနတ်တို.ရဲ. အသက်အားဖြင်.ဆို ၃ နာရီလောက်
နိမ္မာနရတိနတ်တို.ရဲ. အသက်အားဖြင်.ဆို ၁ နာရီခွဲ
ပရနိမ္မိတ၀သ၀တ္တီနတ်တို.ရဲ. အသက်အားဖြင်.က ၄၅ မိနစ် ခန်.ပဲရှိတာ။
ဘယ်လောက်မှကြာတာမဟုတ်ဘူး။ လူ.ဘ၀ဆိုတာ သမုဒ္ဒရာရေပြင်ထက် ခဏတက်သည်.ရေပွက်ပမာ ဆိုတာလို ခဏလေးမှ ခဏလေးပါပဲ။
ဒါကြောင်. သက်တမ်းအင်မတန်တိုတဲ. လူတွေကောင်းကောင်းစားရဖို.၊ ကောင်းကောင်းဝတ်ရဖို.၊ ကောင်းကောင်နေရဖို.၊ ကောင်းကောင်းဇိမ်ခံရဖို.နဲ. ကောင်းကောင်း ပျော်ပါးကြဖို.အတွက်တင် လှုပ်ရှားရုန်းကန်ရင် အချိန်ကုန်ပြီး သေတော.အပါယ်လေးပါးရောက်ကုန်မှာစိုးလို. ဗြဟ္မာကြီးက သူ.အယူအဆကို ဘုရားလာလျှောက်တာ။
ဒါပေမယ်. ဗြဟ္မာကြီးရဲ. လျှောက်ထားချက်က မပြည်.စုံဘူးဖြစ်နေတယ်။ ကာမရာဂကို ပယ်ဖို.ဆိုတာ အနာဂါမိမဂ်နဲ. ပယ်တာဆိုရင်တော. ကောင်းပါတယ်။ အဲဒီလိုမဟုတ်ဘဲ ကာမရာဂကို ဈန်ကုသိုလ်ကြောင်. ဗြဟ္မာဖြစ်ပြီး ပယ်တာဆိုရင်တော. မကောင်းသေးဘူး။
ဘာကြောင်.လဲဆိုတော. ပုထုဇဉ်ဗြဟ္မာအနေနဲ. ဗြဟ္မာဖြစ်တုန်းသာ ကာမရာဂကိုပယ်နိုင်ပေမဲ. နောက်ဘ၀တွေမှာက အပါယ်လေးပါးကို ပြန်ရောက်နိုင်သေးတယ်။
ဒါကြောင်။ မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီး ပြန်လည်မိန်.ကြားပုံက…
ရင်ဝကိုလှံဖြင်. ထိုးစိုက်ခြင်းခံနေရသောသူသည် အခြားသော ကိစ္စမှန်သမျှကို လုပ်မနေနိုင်ဘဲ ရင်ဝမှာ စူးဝင်နေတဲ.လှံကို အမြန်ဆုံး ဆွဲနုတ်ပြီး ဆေးကုဖို.ကိစ္စသည် အရေးအကြီးဆုံးဖြစ်သကဲ.သို.လည်းကောင်း။
ခေါင်းပေါ်ကဆံပင်ကို မီးဟုန်းဟုန်းစွဲလောင်ခြင်းခံနေရသူသည် အခြားသောကိစ္စမှန်သမျှကို လုပ်မနေနိုင်ဘဲ ဦးခေါင်းက မီးတောက်ကို အရေးတကြီး ငြိမ်းသတ်ပြီး မီးလောင်ဒဏ်ရာကို ဆေးကုဖို. ကိစ္စသည်သာ အရေးအကြီးဖြစ်သကဲသို.လည်းကောင်း။
သတ္တ၀ါတွေအတွက် ဘ၀များစွာ သံသရာတစ်ခွင်မှာ အပါယ်လေးပါးကိုကျစေတတ်တဲ. သက္ကာယဒိဋ္ဌိ ဘေးဆိုးကြီးကို အမြစ်ပြုတ်ပယ်နိုင်ဖို.ကိစ္စသည် အရေးတကားအရေးအကြီးဆုံးပါပဲလို. ဘုရားရှင် ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးက ပြန်လည်မိန်.ကြားတော်မူလိုက်တယ်။
သက္ကာယဒိဋ္ဌိကို ပယ်ခိုင်းတယ်ဆိုတာ သောတာပန်ဖြစ်အောင် လုပ်ခိုင်းတာနဲ. အတူတူပဲနော်။ ဘာဖြစ်လို. ဒီလောက်တောင် ပိုအရေးကြီးနေရတာလဲ ဆိုတော….
ရင်ဝကိုလှံစူးနေတဲ.သူနဲ. ဦးခေါင်းကို မီးလောင်နေတဲ.သူတွေက ဆေးကုတာနောက်ကျလို. သေမယ်ဆိုရင်တောင် ဒီတစ်ဘ၀ပဲသေမှာ။ နောက်ဘ၀အထိ ဒုက္ခပေးလို.မရပါဘူး။
သက္ကာယဒိဋ္ဌိကို မပယ်ရသေးတဲ.သူကျတော. ဘ၀အဆက်ဆက် ဒုက္ခလိုက်ပေးနေလို. အပါယ်လေးပါးဟာ ကိုယ်.အိမ်ကိုယ်.ရာလိုပဲ အမြဲရောက်နေမှာ။ ဒါကြောင်.မို….
ရင်ဝကလှံကို နောက်မှနုတ်။ ခေါင်းကို မီးလောင်ရင်လည်း နောက်မှငြိမ်း။ သက္ကာယဒိဋ္ဌိကိုသာ အရင်ဖြုတ်ကြတဲ.။
မြစိမ်းတောင်ဆရာတော်ဘုရား (သောတာပန်ဆိုတာဒီလိုပါ “တရားတော် စာအုပ်မှ ကောက်နုတ်ပူဇော်ပါသည်။)
Posted by minthantzaww at 09:00